South Africa bụ mba dịgasị iche iche na nke dị iche iche nke na-anabata ndị ọbịa nwere ogwe aka, ma ọbụbụbụbụbụbụbụ ndị ọbịa nwere ike ịbịpụ n'oge na-adịghị anya mgbe a na-eleghara ịsọpụrụ anya. Nke a bụ ihe ise kachasị mkpa ị ga-ama ma a bịa n'ihe ziri ezi na South Africa.
Dị nnọọ ka UK, ọ bụ omenala ịkwanye ndị na-echere ọrụ na ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ndị ọkwọ ụgbọala taxi maka ezigbo ọrụ. Ụdị ego dị gburugburu 10%. Otú ọ dị na South Africa, ọ bụkwa omenala iji mee ka ndị nduzi nleta ọ bụla, ndị nlekọta ụlọ oriri na ọṅụṅụ, mmanụ ụgbọ ala na ndị na-adọba ụgbọala.
Ọtụtụ mgbe ndị na-ahụ maka ebe ndị na-adọba ụgbọala ga-eyi uwe mara mma ma ọ bụ yikwasị uwe ha ma dowe ihe ọ bụla ruo R5 maka ile ụgbọ ala gị, na-echebe ya pụọ ​​ohi ma ọ bụ mmebi mgbe ị nọ. Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu n'ime ndị ọrụ a bụ ndị na-akwụwa aka ọtọ ma bụrụ ndị a pụrụ ịtụkwasị obi, mana n'ọtụtụ ọnọdụ, ụdị ikike ọbụla anaghị achị ha ma ọ bụrụ na ha anọghị ebe ahụ mgbe ị lọtara, ya ejula gị anya. Ọ bụrụ na ị maghị nke ọma, mepee ụgbọala n'ụgbọala na ogige ntụrụndụ a họpụtara, a na-enwekarị ọtụtụ ihe, karịsịa na obodo.
Onye na-akpọ maka nri abalị
Ndị Barbeques na-ejikọkarị ya na Australia, mana ihu igwe mara mma na ụba nke oghere n'èzí pụtara na ha na-enwekwa mmasị na South Africa. Mgbe akpọrọ gị na braii (BBQ) were ihe ọ bụla i bu n'obi iri nri tinyere ntakịrị ihe maka ìgwè ahụ. Ọ bụrụ na onye na-elekọta gị na-ekwusi ike na ọ dịghị gị mkpa iwebata ihe ọ bụla, were ụfọdụ mmanya ma ọ bụ okooko osisi na-ekele ha maka ọbịa ha.
Okposụkedi mmebe ke South Africa bụ ndị na-ezughị ezu, ndị a zọlitere azụ, adịghị emehie nke ịghọ ọdịbendị. Echiche ọ bụla nke na-ahụ obodo ebe a dịka ma nwa ma ọ bụ na-acha ọcha ma ọ bụ ọgaranya ma ọ bụ ndị dara ogbenye bụ ihe dị mfe ma dị njọ. E nwere ọtụtụ mba na okwukwe na South Africa na àgwà na àgwà nke ndị mmadụ n'otu n'otu dị iche. Ihe nzuzo bụ ka ọ ghara ichetụ ihe ọ bụla, nke a bụ Mba nke Rainbow na ọ ga-eju gị anya mgbe niile.
Ọ bụghị ihe a na-ahụkarị maka ụmụ nwoke iji gosipụta ekele ha nwere maka ụdị nwanyị site ma ọ bụ na-etu ntamu na, ma ọ bụ na-arịọ nwanyị ka ọ kwụsị ma kwurịta oge. Nke a ekwesịghị izute ụdị ụdị iro ọ bụla ma jiri obi ụtọ nakweere ya dị ka nkwanye ùgwù nke e bu n'uche ya. Ịmụmụ ọnụ ọchị zuru oke nkwenye, mana echeghị na ị ghaghị ịkwụsị ma soro na mkparịta ụka.
N'obodo ụfọdụ n'ime ime obodo ndị a na-egosighi na ha nweere onwe ha, ha na-egosikarị nkwanye ùgwù ma jiri nlezianya karịa ụmụ nwanyị ala. Otú ọ dị, n'ime obodo ndị a dị ntakịrị, ndị inyom na-aṅụ mmanya ma ọ bụ ọrụ na-eleghara anya dịka 'adịghị mma' karịa ndị na-adịghị. Nke a apụtaghị na ị ghaghị ịgbanwe àgwà gị n'ụzọ dị ịrịba ama, dị nnọọ ka ị mara àgwà nke ụlọ ahụ ma nwee uche banyere onwe gị.
Ọ gwụla ma ị na-aga nzukọ obodo ma ọ bụ ịnweta ụgbọ elu, atụla anya oge. A na-emeso oge dị mma karịa na South Africa, ọ dịghịkwa mkpa ịsọ ọsọ. Karịsịa, mgbe ị na-abịa maka njem ọha na eze na oge njem, ị nwere ike ịtụ anya ịnụ okwu ahụ, 'gbakwunyere'. Nke a pụtara na ọ bụrụ na njem gị ga-alaghachi na Cape Town na 5pm, gbakwunyere / mwepu, ọ ga-abata n'oge ọ bụla n'etiti 5 na 9pm. Otú ọ dị, nke a apụtaghị na ị gaghị enwe oge ọ bụla site n'aka gị! Jide n'aka na ị na-abata n'oge, ma ọ bụrụ na nke ahụ pụtara njem ọ bụla anya, ụzọ kacha mma bụ ịhazi ugbo ala.
Comments Off na Mind Your Manners - Olee otú ime na South Africa
Oge ezumike azụ-azụ na Lanzarotehttps://i0.wp.com/www.carrentalchoice.com/wp-content/uploads/2017/12/Lanzarote-spain.jpg?resize=600%2C720&ssl=1
Ịkụcha ego nke njem njemhttps://i0.wp.com/www.carrentalchoice.com/wp-content/uploads/2018/01/Cutting-Cost-of-Overseas-Travel.jpeg?resize=600%2C800&ssl=1